Egypta: Nirehitra Ny Teatira Nasionaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 16:44 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Français, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 28 Septambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Toa hita fa nahavita namelona indray an'i Néron ny Egyptiana. Ary misy ny lisitra lavan'ireo toerana izay hodoran'i Néron Egyptiana. Ary nanomboka izany tamin'ny Parlemanta Egyptiana izy herinandro vitsivitsy lasa izay, ary ankehitriny tonga ny fotoana ho an'ny Teatira Nasionaly Egyptiana .
Manoratra eto momba ny loza nitranga androany ilay bilaogera Egyptiana El-hanem. Hoy izy:
Nanomboka nirehitra ny Tranoben'ny Teatira Nasionaly ao afovoan-tanànan'i Kairo androany tamin'ny 5 ora hariva .Nangina ny tanàndehibe tamin'io fotoana io satria volana masin'ny Ramadany ary efa teo am-piomanana ho amin'ny fanapahana ny fifadian-kanina ny Miozolomana eto an-toerana .
Ny loharanom-baovao avy any amin'ny Sampan-draharahan'ny Mpamonjy Voina no nilaza fa nanomboka tamin'ny 5:35 hariva ora ao an-toerana ny afo, rehefa nirehitra tokony ho ora roa ny lambam-baravaran'ny teatira. Soa ihany fa tsy nisy ny niharan-doza tao afa-tsy ny voina madinika noho ny fifohana ny setroka. Fiara mpamonjy voina mihoatra ny 35 no nirohotra nakany amin'ny teatira nirehitra any amin'ny kianja El Attaba izay toerana misy ny Sampan-draharahan'ny Mpamonjy Voina rahateo .
Azo inoana fa noho ny fitselarana elektrika no niteraka ny afo, narahina fipoahan'ny iray amin'ireo rafitra famerana mari-pana tao amin'ny teatira , izay nandrava ny faritra sasany tamin'ny haingon'ny teatra .